Banyere Anyị - Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd emi odude ke tụụrụ Yangtze River Delta aku mpaghara geometric center., Azụ Yangtze osimiri, Taihu gbakwasara. N'ebe ọwụwa anyanwụ ruo na etiti akụ na ụba China-Shanghai kilomita 150, ọdịda anyanwụ site na isi obodo ochie-Nanjing kilomita 150, n'ebe ndịda ruo Wuxi Sunan International Airport dị kilomita iri ise. Jinghu na yanjiang okporo ụzọ awara awara abụọ na-ezukọ na mpaghara jiangyin, akwa ụgbọ mmiri jiangyin Yangtze na-agwa ugwu na ndịda nke osimiri Yangtze, bụ ọdụ ụgbọ njem dị mkpa na Osimiri Yangtze. Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd dị na mpụga ọwụwa anyanwụ nke ogige ntụrụndụ nke ụlọ ọrụ.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd a Joint-ngwaahịa enterprise nke ụtụtụ na Science, Industry na Trade. O nwere ihe karịrị ndị ọrụ 300, gụnyere ihe karịrị 88 ọkachamara na kọleji na ndị ọrụ aka ọrụ. Ugbu a ọ bụ onye so na netwọkụ ike anyanwụ na China. Companylọ ọrụ anyị agafeela ISO9001: Asambodo Sistemụ Njikwa Nlekọta 2008, ISO14001 Asambodo Sistemụ Njikwa gburugburu ebe obibi, Asambodo Sistemụ Ahụike Ahụike na Nchekwa nke 18001. Ngwaahịa ndị ahụ gụnyere mmanụ mmanụ, nri mmanụ, nri, mbupu, ụgbọ okporo ígwè na ahịrị elektrọn, wdg. Companylọ ọrụ anyị nwere ahịa, ire ahịa, ngalaba ọrụ ngo, ngalaba teknụzụ, QC, ụlọ nka, ngalaba mmepụta, labs, ngalaba ọrụ, wdg, nke na-enye sistemu mmesi obi ike maka mmepụta, ogo ahịa na ahịa ahịa ngwaahịa.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ tinyere ego na ezinụlọ siri ike, haziri ma mepụta ihe karịrị ọkụ iri na-ebu ọkụ, eriri roba na akwa mpempe akwụkwọ. Ugbu a, anyị nwere banbury 3, igwe agwakọta 12, otu 1830 mpịakọta mpịakọta anọ, otu 1730 atọ mpịakọta calender, igwe mmadụ 1400 na-agwọ ọrịa, mmadụ abụọ 1800 igwe na-agwọ ọrịa, ihe igwe 2000 na-agwọ ọrịa, otu 2200 igwe eji eme udiri ogwu, otu igwe ihe eji acho ihe di 3000, ihe di iche-iche di iri-abuo na iri abuo, igwe igwe di iri abuo na abuo bu uwa kachasi. Ọzọkwa, anyị nwere igwe nrụpụta igwe 8, ya bụ 2400 * 10000, 4000 * 2000, 1500 * 3000, 1400 * 5700, 1400 * 4000, 1200 * 2700, 650 * 4000. Na 2016, anyị mere igwe sara mbara, obosara bụ 24 mita.
Caycemay lekwasịrị anya n'iwebata ihe ndị siri ike yana ngwa ndị dị nro. Ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọrụ ruru eru na-arụ ọrụ ma gụọ akwụkwọ iji hụ na arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ, njikwa nke mmepụta na ikike ịzụlite ngwaahịa. Ka ọ dị ugbu a, iji kpokọta ozi ahịa ọhụụ na ozi usoro nke na-akwado ịba ọgaranya na ngwaahịa ọhụrụ, Caycemay eguzobewo mmekọrịta na-adịgide adịgide ma kwụsie ike na ụfọdụ ụlọ ọrụ nyocha. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ nwere akwụkwọ ikike iri na abụọ, akwụkwọ mpempe akwụkwọ silicone, akwụkwọ nkwonkwo silicone na-ekpo ọkụ na-eguzogide ọgwụ, na-esonye na nyocha nke ụkpụrụ mba nke roba.
Ogo bụ ndụ nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-etinye oke mkpa maka njikwa njikwa ngwaahịa, anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ na-etinye uche na njikwa mma, anyị nwere ụlọ nyocha ngwaahịa, ụlọ nyocha, ụlọ nyocha. Na mmepụta ahụ, anyị na-arapara na mmepụta tozuru etozu, mmanye siri ike nke ụkpụrụ nke mba, ụkpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụkpụrụ ụlọ ọrụ, ka ngwaahịa ahụ wee nwee ike igboju ihe ndị ahịa chọrọ.
Ngwaahịa ụlọ ọrụ Caycemay metụtara mmepụta mba n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche na mba ahụ, a na-ebupụ ụfọdụ ngwaahịa n'ọtụtụ mba. Ọnụ ọgụgụ mmepụta ya, ogo ya, ọnụahịa ya, nnyefe ya na ndị ahịa ya ọrụ nwere otuto nke ndị ahịa ma nwee nnukwu aha.
Caycemay na-eleba anya na ọkwa dị elu, gbarie ma banye teknụzụ dị elu nke mba ọzọ, ọ bụ ọrụ ya bụ iji dochie mbubata, mee ka ọnụego ụlọ dịkwuo elu. A na-enye ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ ụlọ ọrụ na-ere ọkụ ọkụ maka ụgbọ okporo ígwè; silicone roba mpempe akwụkwọ maka anyanwụ laminator, iko, woodworking na kaadị-arụ ezigbo aha; roba roba na-emepe emepe nke ọma.
Site n'echiche nke ịdị elu, ọrụ kacha mma, ọnụahịa asọmpi ga-akwụsi ike ma mekwuo ụlọ ọrụ ahụ, Caycemay na-aga n'ihu na-ewulite ọdịbendị na echiche nke "dabere na mmadụ." Omume a na-agba ndị ọrụ ahụ ume iji meziwanye ibu ọrụ na ikike imeghari nke na-eme ka ume na ịdị n'otu nke ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo elu.
Site n'echiche "ezi obi na ntụkwasị obi na-adọta ndị ahịa n'ụwa niile", Caycemay jiri ịnụ ọkụ n'obi nabata gị ka ị gaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-atụ anya ka ị nweta ntụkwasị obi gị, nkwado na ịja mma n'ihi ngwaahịa na ọrụ kacha mma nke Caycemay.
Caycemay eguzobewo usoro mmesi obi ike nke ọma site na akụrụngwa na-abanye na ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-ere ahịa ahịa na nzukọ mmepe ngwaahịa ọhụụ yana injinia na teknụzụ dịka isi ahụ. Dabere na ịkwado mmepụta nke ngwaahịa ndị dị ugbu a ma nwekwuo ogo ngwaahịa. Mee ka ike nke mgbanwe nkà na ụzụ na nkà na ụzụ ọhụrụ dịkwuo ike, site na imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ sayensị na ụlọ ọrụ mahadum. Ndị ọkachamara si mba ọzọ. Gbanwee nsogbu ọrụ aka na usoro mmepụta na ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ. Companylọ ọrụ Caycemay dị njikere inye ndị ahịa ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na usoro, zaa ma kpochapụ nnyefe ọrụ nnyefe (ebu) ma họrọ ngwaahịa izipu kwesịrị ekwesị (ebu ebu) iji zute nkọwa ọrụ nke onye ọrụ yana ngwa achọrọ. Akụrụngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na nke ụlọ ọrụ mepụtara ma mepụtara nwere ike hụ na njikọta ngwa ngwa na eriri dị na eriri na saịtị nke eriri ahụ. Belata nkwụsịtụ. belata n'ichepụta ego. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkọwa nha na nkọwa nke eriri ahụ, eriri na-enweghị ngwụcha ma ọ bụ eriri na-emeghe, ma ọ bụ mgbatị na-ebuli eriri, ibe ndu ma ọ bụ sket na belt ahụ. Anyị maara maka ọchịchọ gị zuru ezu maka eriri, ma kwenye na ọrụ anyị ga-enyere gị aka.